Darpan Nepal – दाँत किराले कसरी खान्छ ?
मानव शरीरको एकदमै महत्वपूर्ण अंग हो, दाँत । प्रायः मानिसले दाँतलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्दैनन् । तर, यसको महत्व खानेकुरा चपाउनदेखि मानिसको सौन्दर्यसम्म जोडिएको हुन्छ । दाँतबारे खासै चासो नदेखाउँदा विभिन्न खालका समस्या देखापर्दछन् । जसमा किरा लाग्नु पनि एक प्रमुख समस्या हो । दाँत बाहिरबाट इनामेल भन्ने सेतो वस्तुले पोतिएको हुन्छ ।
इनामेल प्राकृतिक रसायन हो । यो धेरै कडा हुन्छ । हाम्रो शरीरमा सबैभन्दा कडा वस्तु इनामेल नै हो । बाहिरपट्टि इनामेल हुनाले कीटाणु हत्तपत्त दाँतको भित्री भागमा पस्न सक्दैनन् । तर इनामेलभिको भाग भने उत्तिको कडा हुँदैन । यसमा कीटाणु सजिलैसँग पस्न सक्छन् । इनामेल जतिसुकै कडा भएपनि यसलाई अमिलाले सजिलै खियाउन सक्छ । दातमा अमिलो लागेपछि त्यहाँक्को इनामेल खुइलिन्छ ।
त्यसैले अमिले खाएपछि दाँत कुँडिन्छ । तर केही समयपछि खुइलिएको भागमा नयाँ इनामेल बन्छ र कुँडिएको पनि हराउँछ । चिनी खाँदा गुलियो लाग्छ । मुखमा धेरै बेर चिनी राख्दातीतो हुन थाल्छ । गुलियो वस्तु धेरै खाँदादाँतको कुनाकाप्चामा अड्किएर अमिलो हुन्छ । यस्तो अमिलोले पनि इनामेललाई खुइल्याउँछ । गुलियोबाट बनेको अमिलोको कारण नयाँ इनामेल बन्न पाउँदैन । इनामेल हराएको मागमा दाँतको भित्री नरम भाग देखा पर्छ । त्यहीँबाट कीटाणुहरू भित्र मस्छन् । यी कीटाणुले दाँतलाई बिगार्ने काम गर्छन् । यसलाई नै दाँत कीराले खाएको भन्छौं ।
Previous Postब्रस गर्दा गिँजाबाट रगत किन आउँछ ? Next Postसरकारी निकायमा जागीर खाएर पक्षपात काम गर्नेहरु लाई जुत्ता को माला लगाएर कोता राया घुमाउने एजेन्डा तय हुँदै छ।